GOPAL BHAGAT PRADHAN MEMORIAL HOSSPITAL – sajilO Online
पुरानो आस्था पोली क्लिनिक अव गोपाल भगत प्रधान मेमोरियल हस्पिटल भएको छ ! निजि स्तरबाट संचालित भए पनि अत्यन्तै न्यून शुल्कमा उपचार हुन्छ यहा ! त्यति मात्र नभएर जिल्लाका बिभिन्न ठाउहरुमा बेला बेलामा निशुल्क: स्वास्थ्य शिविर तथा निशुल्क: औसधि वितरण कार्यक्रम पनि यस अस्पतालले गर्दै आएको छ ! चौबिसै घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, तथा अस्पतालका अन्य सम्पूर्ण अतिरिक्त सेवा यहा उपलब्ध छन् !
नोट: सजिलो अनलाईनका मेम्बरहरूलाई यहा उपलब्ध सेवा तथा सुविधाहरूमा बिसेस छुट तथा सहुलियत को ब्याबस्था गरिएको छ !
गोपाल भगत प्रधान मेमोरियल अस्पताल खादबारी
Gopal Bhagat Pradhan Memorial Hospital